बीबीसी - कान्तिपुर समाचार
म्यानचेस्टर युनाइटेड र एट्लेटिको म्याड्रिडका पूर्व स्ट्राइकर डिएगो फोर्लानले क्लब फुटबलबाट संन्यास घोषणा गरेका छन् । उरुग्वेका लागि १ सय १२ अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका ४० वर्षीय फोर्लानले स्पेनिस क्लब भिल्लारियल र इटालीको इन्टर मिलानबाट पनि केही समय खेले । पछिल्लो समय उनले सन् २०१८ मा हङकङको किची क्लबबाट खेलेका थिए ।
पछिल्लो तीन सिजन इंग्लिस प्रिमियर लिगको शीर्ष ६ मा आर्सनल, चेल्सी, लिभरपुल, म्यानचेस्टर सिटी, म्यानचेस्टर युनाइटेड र टोटेनहमले पकड राखेका छन् । यसमध्ये नयाँ सिजन अगाडि केही टिम भने संकटमा छन् वा क्लबभित्र केही न केही समस्या छ । यस्तोमा सन् २०१९–२०२० को सिजन यी ६ क्लबको प्रभुत्वमा कोही नयाँले धावा बोल्न सक्नेछ त ? यसपल्ट यी ठूला ६ क्लबलाई छुन सक्ने कुनै क्लब होलान् त ?
युरोपेली च्याम्पियन्स लिग र पीएफए प्लेयर अफ द इयर विजेता, के यति उपलब्धिपछि लिभरपुलका डिफेन्डर भर्जिल भान डाइकले बालोन डे’अर जित्ने छन् त ? उनी यो अवार्ड जित्नका लागि यसपल्टका सबैभन्दा बलिया प्रत्याशीमध्ये एक हुन् ।
टोटेनहमले अन्तिम पटक लिग जितेको पनि ५८ वर्ष भइसकेको छ । त्यो त्यही समय हो, जति बेला बिटल्सले आफ्नो पहिलो गीत जारी गरेको थियो । इंग्ल्यान्डले विश्वकप जित्न अझै १० वर्ष बाँकी थियो । सबै प्रकारका अविश्वास चिर्दै अब टोटेनहमसँग आफ्नै रंगशालामात्र छैन, विश्वकै सबैभन्दा उत्कृष्ट मान्न मिल्ने अभ्यास मैदान पनि छ ।
लिभरपुलको अभियान के कमजोर हुनेछ ?
गत सिजन म्यानचेस्टर सिटी र लिभरपुलले इंग्लिस प्रिमियर लिग इतिहासमै सबैभन्दा बढी अंक बटुले । त्यसको कारण दुवै टिमका आक्रामक खेलाडी नै थिए । सबैखाले प्रतियोगितामा सिटीले १ सय ६९ गोल गरेको थियो ।
बीबीसीका लेखहरु :
रुसको खेलकुद मन्त्रालयले क्रिकेटलाई आधिकारिक खेलको रूपमा दर्ता गर्न अस्वीकार गरिदिएको छ । एकदिवसीय विश्वकपअन्तर्गत इंग्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्डबीच नाटकीय फाइनलकै दिन रुसमा क्रिकेटको आधिकारिकता अस्वीकृत भएको हो । रुसमा पेटांक, ड्रग्ट र मिनी–गल्फले आधिकारिक मान्यता पाएका छन् ।
कुनै पनि खेल होस्, कोही पनि आइरिस प्रशंसकले कहिल्यै पनि इंग्ल्यान्डको समर्थन गर्दैनन् । जति बेला विश्वकप क्रिकेटको लर्ड्समा भएको फाइनलमा इंग्ल्यान्डले न्युजिल्यान्डको सामना गरेको थियो, ती सबै समीकरण फेरिए ।
भर्जिनिया बीच सिटीमा गोलीकाण्ड, ११ जनाको मृत्यु
‍अमेरिकाकाे भर्जिनियास्थित एउटा सरकारी भवनमा भएको गोलीकाण्डमा ११ जना मारिएका छन्। घटनामा एक प्रहरी सहित अन्य छ जना घाइते छन्।
टुक्रिएको मन र वास्तविक क्रोधले सधैं कुनै न कुनै चर्चित गीत सिर्जना गराएको छ । डोली पार्टनको 'आई विल अल्वेज लभ यु' देखि एडेलीको 'सम वन लाइक यु' र साम स्मिथको 'स्टे विथ मी' जस्ता चर्चित गीत त्यस्तो उदाहरण हो, जसले आँसुलाई सुनमा परिणत गरिदिएको छ ।